Go'aanka ay qaateen Rooble iyo madax goboleedyada oo kasii daraya xiisadda dalka - Caasimada Online
Home Warar Go’aanka ay qaateen Rooble iyo madax goboleedyada oo kasii daraya xiisadda dalka
Muqdisho (Caasimada Online) – Tan iyo markii ay Midowga Musharaxiinta Mucaaradka ay qaadaceen hanaanka doorashada dalka, gaar ahaan midda Golaha Shacabka ayaa waxaa isa-soo taraya walaaca iyo cabsida laga qabo in dalka ay ka dhacaan rabshado.
Madasha Wada-tashiga Qaran oo ayadu leh awooda socodsiinta doorashada, islamarkaana ay kasoo baxeen heshiisyada loogu jiheystay doorashada ayaa go’aan ka gaarista is-mari-waaga ka taagan doorashada xal u noqon lahaa, sida ay qabaan qaar kamid ah fallan-qeeyayaasha siyaasadda.
Aamusnida Madasha Wada-tashiga Qaranka ayaa la fahamsan yahay in Midowga Musharixiinta ay kusii riixeyso inay sii wadaan kulamada ay uga arrinsanayaan samata-bixinta qaranka iyo qabashada doorasho hufan oo daah-furan.
Midowga Musharaxiinta ayaa sidoo kale ka howl-galaya qabsoomida shirwayne Wada-tashi Qaran oo ay isugu yimaadaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed.
Sida ay hore u baahisay Caasimada Online dokumenti ay heshay oo ah dhismaha GOLAHA SARE EE DALKA (HIGH COUNCIL OF STATE) oo ujeedkiisu yahay inuu dalka ka badbaadiyo dagaal, kana saaro xaaladda cakiran, oo uu gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah.
Sida ku cad dokumentiga, heshiiskan siyaasadeed waxa u dhisayaa GOLAHA SARE EE DALKA (HIGH COUNCIL OF STATE) kaas oo soo magacaabi doono Wasiirka 1aad ama Raisal Wasaare isna soo dhisi doono XUKUUMAD BADBAADO QARAN oo ka shaqeyn doonta: Xoreynta Dalka, Dhameystirka Dastuurka Dalka iyo u codeyntiisa iyo Qabashada DOORASHO QOF IYO COD AH. – Halkan guji oo ka arag dokumtigaas oo dhameystiran